Moments Neshamwari 25
Sei mabwe anokosha akagoverwa kune mamwe mwedzi egore? Izvi zvinokonzerwa nechimwe chinhu kunze kwekufungidzira kwevanhu here?
Matombo mamwe chete aya anonzi nevanhu vakasiyana ndevemwedzi dzakasiyana, uye humwe hunhu hunonzi hunouya kubva kune mamwe mabwe kana akapfekwa mumwedzi kana mukati memwaka vanhu ava vanoti vanofanirwa kupfekwa. ichokwadi, uye mazhinji acho anonyanya kuitika nekuda kwekuda. Asi fenzi basa risingajairike repfungwa kana kufungidzira kwakashata kwekufunga; nepo, fungidziro ndirwo mufananidzo unogadzira kana kuvaka chimiro chepfungwa. Nenzira imwecheteyo iyo inokonzeresa kuratidza kusarongeka kwechinhu chinhu pachayo, saka zvingangoita fancies pamusoro pehunhu hwematombo nekuda kwehunhu huri mumatombo ivo pachavo uye neruzivo rwaimbove narwo maererano nemasimba emabwe. , asi iro rakarasikirwa neruzivo rinosara zvirindiro chete, kana kushanda kwakashata kwepfungwa, sekuratidzwa kweruzivo rwekare rwakachengetwa mutsika dzevarume. Zvese zvinhu zvinzvimbo kuburikidza ne izvo masimba ezvisikwa anoita. Zvimwe zvinhu zvinopa nzvimbo dzisina simba kuti mauto aite mukati kupfuura zvimwe zvinhu. Izvi zvinokonzeresa kurongeka kwezvikamu zvezvinhu zvakasiyana mune chimwe chikamu. Copper iyo yakagadzirirwa uye yaiswa waya inopa mutsara pamwe iwo magetsi unokwanisa kuitirwa kune yakapihwa nzvimbo. Magetsi haangamhanyire pamwe neshinda yeasilika, kunyange ichimhanya neimwe waya yemhangura. Nenzira imwecheteyo sezvo ndarira iri svikiro kana conductor yemagetsi, saka mabwe anogona kunge ari nzvimbo maanosangana nevamwe mauto, uye segoridhe iri nani conductor yemagetsi kupfuura mamwe masimbi, senge zinc kana lead, saka mamwe matombo ari nani nzvimbo dzamauto adzo pane mamwe matombo. Iro pure iro ibwe zvirinani zviri kuita sepakati pesimba.
Mwedzi wega wega unounza imwe pesvedzero yekutakura nepasi uye zvinhu zvese zvepanyika, uye, kana matombo aine zvawo matanho sezvimbo dzesimba, zvingave nemufungo kufunga kuti mamwe matombo angave ane simba rakanyanya senzvimbo dzesimba, panguva iyo simba remwedzi raive nesimba rakawanda. Hazvina musoro kufunga kuti kwaive neruzivo rwenguva kana mabwe aine humwe hunhu uye nekuda kweizvi ivo vekare vaiziva vakagovanisa mabwe mwedzi yavo. Kuti ubatanidze chero ukoshi hwematombo hazvibatsiri pane izvi kana munhu iyeye anogona kutora ruzivo rwake kubva kune almanac kana bhuku rekuzivisa rombo kana mumwe munhu ane ruzivo diki saiye. Kana munhu achinzwa achida dombo pachezvake, kunze kwekutengeserana kwako, ibwe rinogona kunge riine simba kubva kwaari kana kwaari. Asi hazvibatsiri uye zvinogona kukuvadza kubatanidza hunhu hwakajeka kune matombo kana mafashoni ayo matombo ndewevamwe mwedzi, nekuti izvi zvinogadzira tendero mumunhu iyeye yekuvimba nechimwe chinhu chekunze kumubatsira mune izvo zvaanofanira kuzviitira iye . Kunyemwerera uye kusave nechimwe chikonzero chakanaka chekutenda kunokuvadza munhu pane kubatsira, nekuti kunokanganisa pfungwa, kuriisa pazvinhu zvinonzwisa tsitsi, kunoita kuti vatye kuti kubva kwairi kunotsvaga dziviriro, uye voita kuti ivimbe nezvinhu zvinobva kunze. pane kuti igozvifunga yega nezvengozi.
Iine dhamondi kana rimwe dombo rinokosha rinokosha kunze kweiyo inomiririrwa nemitemo yemari here? uye, kana zvakadaro, kukosha kwedhaimani kana rimwe dombo rakadaro kunodini?
Dombo rega rega rine mutengo kunze kwekutengeserana kukosha kwake, asi nenzira imwechete yekuti havasi vese vanoziva kukosha kwayo yekutengesa saka havasi vese vanoziva kukosha kweimwe dombo kunze kwaro kukosha kwemari. Munhu asingazivi kukosha kweanoda madhaimani anogona kuupfuura nepaaigona kuita chinguva chakajairirwa. Asi iyo yekubvunzurudza ichiziva kukosha kwayo ichaichengetedza, iite kuti igurwe nenzira yekuratidzira runako hwayo, wozoipa kurongeka kwakakodzera.
Kukosha kweiro ibwe pacharo kunoenderana nekuva kwayo nzvimbo yakanaka yekukwezva kwechimwe chinhu kana mauto uye kugovera izvi. Matombo akasiyana anokwezva masimba akasiyana. Haasi masimba ese anobatsira kuvanhu vamwe chete. Mamwe mauto anobatsira vamwe nekukuvadza vamwe. Iro dombo rinokwezva rimwe simba rinogona kubatsira rimwe uye kukuvadza rimwe. Mumwe anofanira kuziva zvakamunakira iye, uyezve kuziva kukosha kweimwe dombo sekusiyaniswa kubva kune vamwe asati azvisarudza zvine hungwaru kuti ibwe ripi raakamunakira. Hazvina basa zvakare kufunga kuti mabwe ane mamwe maratidziro parutivi kubva pamubhadharo wemari kupfuura iwo kufunga kuti iro rakanzi dombo renzvimbo rine imwe kukosha kupfuura izvo zvakafanira mumari Mamwe matombo haana kunaka mukati mavo, vamwe vane mauto kana zvinhu zvinoshanda nesimba kuburikidza nazvo. Saka magineti ine simba remagineti inoshanda nesimba mukati maro, asi simbi yakapfava haina kunaka uye hapana simba rakadaro riri kuita kuburikidza nayo. Matombo ayo ari nzvimbo dzemauto anoshanda haakwanise kuchinjiswa mumutengo; asi matombo akashata anogona kubhadharwa nevanhu vamwe uye kuita nzvimbo dzemauto kuti vatore kuburikidza, nenzira imwechete iyoyo sinyoro nyoro inogona kupiswa nemagineti uye vozoita magineti Matombo ayo, semagneti, ari nzvimbo kuburikidza neanaro kana anopfuura. mauto chiito ndevaya akarongeka neakasikwa kana akadaidzwa nechisimba kana akabatana nemauto nevanhu vamwe. Avo vanopfeka mabwe anova nzvimbo dzine simba vanogona kukwezva kwavari mamwe mauto, setsvimbo yemheni inogona kukwezva mheni. Pasina ruzivo rwematombo akadaro uye nehutsika hwadzo, kuedza kushandisa matombo nekuda kweichi kuchazongotungamira mukuvhiringidzika kwekufunga uye nehunyanzvi hwekusaziva. Iko kune chikonzero chidiki chekuita nenzira yekuda nemabwe nematombo kana nechinhu chero chipi zvacho nekuda kwemashiripiti, kunze kwekunge munhu achiziva mitemo inotonga chinhu chinofanira kushandiswa uye chimiro chemunhu kana mauto ane chekuita nacho icho chinofanira kushandiswa kana kushandiswa. Nzira yakanakisa pamusoro pechimwe chinhu chisingazivikanwe ndeyekuchengeta ziso rakavhurika nepfungwa uye kugadzirira kugamuchira chero chinhu chinoita sechine musoro nezve chinhu ichocho, asi kuramba kugashira chero chinhu zvacho.